Ngwaọrụ ndị a ga-eme ka mmepe nke ihe omuma gị dị oke ọnụ, dị mfe iji chepụta ma bipụta, ụfọdụ gụnyere usoro ịkọ akụkọ iji hụ ka esi kesasịa ma bulie akwụkwọ ozi gị. Offọdụ n'ime ha dị obere ka ị nwee ike ịnagide nsogbu ụfọdụ, mana ha niile masịrị gị.
Nwere ike ịnọdụ ala na nchịkọta nke ọnụ ọgụgụ na-adọrọ mmasị ma na-anwa ịme ka ụyọkọ chaatị dị na infographic. Nke ahụ abụghị ihe infographic bụ maka, nke ahụ bụ ihe Excel bụ. Ihe omuma ihe omuma kwesiri inwe isi okwu nke nwere ihe mgbaru ọsọ doro anya na ihe ichoro iburu ma obu kowara ndi na ege gi nti. Ihe omuma ihe omuma na-ejegharị onye ọrụ site na akụkọ ka ha wee nwee ike idowe ma ghọta ozi ahụ. Ihe omuma ihe omuma gi gha agha na udiri udiri oku iji kee ya onu.
Tags: chepụta ihe infographicmfendị na-emepụta ihena -arụ ọrụozionye mmebe ihe omumaonye na -emepụta ihe ọmụmaonye na-eme ihe omumainfographic ikpo okwundebiri ndebiriios infographic onye kereInfographics Ahịandị na-emepụta ntanetị n'ịntanetịeserese eseresengwaọrụveningagevisme
Daalụ maka ndepụta ahụ. Nke a dị mma ịhụ ka ụwa mgbasa ozi ọha na eze na-atụgharị ngwa ngwa karịa ederede.
Kwere @valerie_keys:disqus ! Na iwere ndị otu imewe nke maara nke ọma na infographics nwere ike ghara iru ọtụtụ mmefu ego ahịa. Ndị a bụ ụzọ dị mma nke ịzụlite nke gị NA idobe ọnụ ahịa!
Agụọla m ụfọdụ ezigbo ihe ebe a.
N'ezie kwesịrị idebanye aha maka ịgagharị. Ọ tụrụ m n'anya ka ị nwara gị
na-eme ka ụdị saịtị a mara mma mara mma.
Septemba 28, 2014 na 8:53 ehihie
Douglas mara mma dee na daalụ maka ịhụ Visme. Naanị ịgbakwunye, Visme gafere infographics; ọ mara mma na-enye gị ohere ịmepụta
ụdị ọ bụla nke visual ọdịnaya gụnyere animation na ngosi.